Basikety : Tanjon`ny Ascut ny hiatrika an`i Afrika -
AccueilSongandinaBasikety : Tanjon`ny Ascut ny hiatrika an`i Afrika
Basikety : Tanjon`ny Ascut ny hiatrika an`i Afrika
Raha toa ka niatrika ny fiadiana ny tompondakan`i Madagasikara taranja basikety, dingana voalohany ny Ascut Atsinanana tany Mahajanga farany teo, dia tafiditra teo amin`ny laharana faharoa izy ireo tamin`ny filaharana ankapobeny. Na izany aza anefa, izy ireo no tompondaka teo amin`ny fiadiana ny tompondakan`ny ligin`i Boeny sady mitana ny laharana voalohany teo amin`ny lehilahy.
Noho izany indrindra dia nanambara ny filohan`ity klioba avy any Toamasina ity, Mbola Rajaonah, fa tanjon`izy ireo ny hiatrika an`i Afrika amin`ny alalan`ny fiadiana ny Coupe d`Afrique des Clubs Champions na ny CACC. Nanipy teny tamin`ireo ekipa lahy sy vavy izay samy Ascut ny lehibeny, amin`ny ezaka hotratrarina amin`izany tanjona izany, nandritra ny lahateniny tamin`ny lanonana niarahabana ny Ascut tamin`ny vokatra azony nandritra ny fiadiana ny tompondakan`i Madagasikara, dingana voalohany notanterahina tany Mahajanga farany teo iny.
Raha ny marina mantsy, araka ny fanazavan`ny mpanazatra ny Ascut, Herilanto Randriamanalina, dia fantatry ny maro amin`ny solon`anarana Baomba. Ny taona 2014 dia ny Ascut no nandrombaka ny tompondakan`i Madagasikara farany. Noho izany, hoy izy ny ho tompondaka no tanjona amin`ity taona 2018 ity.
Raha mikasika ny Ascut manokana, dia efa inenina nandrombaka ny «Coupe des Clubs Champions de l`Ocean Indien> na ny CCCOI izy ireo ny taona 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, ary 2017. Indimy kosa no nandrombaka ny tompondakan`i Madagasikara.
Noho izany indrindra no nahatonga ny filohany, Mbola Rajaonah, nanipy teny tamin`ireo mpilalao fa tsy maintsy miezaka ny Ascut amin`ny hahazoana ny tompondakan`i Madagasikara amin`ity taona 2018 ity, izay hotanterahina amin`ny volana oktobra ny dingana faharoa eto Antananarivo.
Ho an`ny sokajy vehivavy dia dingana lahibe no vita hoy ny filohany, Mbola Rajaonah, raha ny vokatra azon`izy ireo nandritra ny dingana voalohan`ny fiadiana ny tompondakan`i Madagasikara, dingana voalohany tany Mahajanga teo. Sambany niatrika ny fifaninanana nasionaly eo amin`ny sokajy vehivavy N1A, nefa avy hatrany dia nahazo ny laharana fahatelo.
Ankoatra izay, nanatanteraka lanonana ho fankasitrahana ireo mpilalao eo anivon`ny Ascut ireo mpitantana, tarihin`ny filohany, Mbola Rajaonah, ny sabotsy,30 jona, teo, tetsy amin`ny trano fisakafoanana le 67. Nisy ny fiarahana misakafo tamin`izy ireo niarahana tamin`ny orinasa mpanohana ny Ascut, ny RLM Communication ahitana ny gazety La Ligne de Mire, Triatra, La Dépêche, AZ Radio sy Tele. Nampahafantarina nandritra ny lanonana ihany koa ny mpiara-miasa manosika ny klioba Ascut, toa ny orinasa Star, ny PMU, sy ny maro tsy ho voatanisa.